यस्ता बिरामीले कहिले पनि खानुहुँदैन करेला !! | सुदुरपश्चिम खबर
गर्भवती हुनुहुन्छ ?ःकरेलामा भएको मोमोकेरिनले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ । बढी करेलाको सेवनले गर्भ तुहिनेसमेत डर हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो आवस्थामा करेला खाँदा ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ ।
फर्टिलिटी समस्या भएमा,यदि फर्टिलिटीसम्बन्धी ओषधि लिइरहनुभएको छ भने करेला प्रयोग गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । करेलाको प्रयोगले फर्टिलिटीसम्बन्धी औषधिको प्रभावलाई कम गर्छ र रोगको मात्रा बढ्दै जान्छ । त्यसैले यस्तो समस्या भएको पुरुष र महिलाले करेला प्रयोग गर्नु हितकर हुँदैन ।
पायल्स छ?ःपायल्सको समस्या छ भने पनि तितेकरेलाबाट टाढै रहनुहोस् । किनकि, तितेकरेलाको प्रयोगले पायल्सको समस्यालाई थप बल्झाउन मद्दत गर्छ ।
शल्यक्रियापछिःशल्यक्रिया गरेपछि पनि तितेकरेलाको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा करेला प्रयोगले रगतमा सुगरको मात्रालाई प्रभावित पार्छ । शल्यक्रिया भएको दूई हप्तापछि मात्र करेला प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
जसमा कलेजोको समस्या छ,तितेकरेलाको अत्याधिक प्रयोगले कलेजोमा एन्जाइम्स बढ्न सक्छ, जसले इन्फेक्सनको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले कलेजोको रोगबाट ग्रसित मानिसले करेलाको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
महिनावारी समस्याःबढी करेला खानाले महिनावारीको समस्यामा अत्याधिक रक्तश्राव हुन सक्छ । त्यसैले महिनावारीको समस्या हुनेहरुले करेलाबाट टाढा रहन जरुरी छ ।
जसलाई सुगर कम छ ःकरेलाको प्रयोगले मानिसमा सुगरको मात्रा सामान्यभन्दा पनि तल झर्न सक्छ । सुगरको मात्रा कम हुनेहरुले भने कहिल्यै पनि करेला खानु हुँदैन ।
हुन त कम्मर दुख्ने समस्या विशेषगरी ४५–६४ उमेर समूहको मानिसमा पाइन्छ । तर बढ्दो तनाव, अनियमित दिनचर्याका कारण यस्तो समस्या हरेकमा उत्पन्न भएको छ । अचम्मको कुरा के छ भने जसलाई यो समस्या शुरु हुन्छ, धेरैजसो मानिसहरुमा १।५ देखि ३ महिनामा स्तवः ठिक हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःकिन दुख्छ कम्मर ?(मांसपेशीहरुमा अत्याधिक तनाव,अत्याधिक तौल,(गलत तरिकाले बस्नु ,(सधैंजसो अग्लो हिल भएको जुत्ता लगाउनु,(गलत तरिकाले अत्याधिक गह्रौं तौल उठाउनु,(लामो समयसम्म बिरामी हुनु,– अत्याधिक नरम डसनामा सुत्दा
कम्मर दुखाईबाट बच्ने घरेलु उपायः(ः१. ताउलाई आगोको सानो आँचमाथि बसालेर त्यसमाथि ज्वानो हाल्नुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस् । त्यो चिसो भएपछि थोरै मुखमा हाल्नुहोस् र विस्तारै चपाउनुहोस् र निल्नुहोस् । यसको नियमित सेवनले कम्मर दुख्ने समस्या हट्दै जान्छ ।
२. धेरै बेरसम्म एउटै स्थान र पोजिसनमा बसेर काम नगर्नुहोस् । हरेक ४० मिनेटपछि आफ्नो कुर्सीबाट उठेर थोरै हिँड्नुहोस् ।३. नरिवलको तेल तताउनुहोस् र त्यसमा लसुनको तीनचार पोटी हल्का रातो नहुञ्जेलसम्म फुराउनुहोस् । यो तेल मनतातो भएपछि कम्मरमा मालिश गर्नुहोस् । दुखाई कम हुन्छ ।
५. नरम सीट, म्याट्रेस, डनलपमा नबस्नुहोस्, नसुत्नुहोस् । कम्मर दुख्ने मानिसहरुले कम नरम डसनाहरुमा सुत्न आवश्यक छ ।६. योगाले पनि कम्मर दुखाईलाई लाभ गर्छ । कम्मर दुखाईका योगासन योगगुरुको रेखदेखमा नै गर्न आवश्यक छ ।
७. क्याल्सियमको कमीले पनि हड्डी कमजोर हुन्छ त्यसकारण क्याल्सियमयुक्त खानेकुराको सेवन गर्नुहोस् ।८. कराईमा दुई तीन चम्चा नुन हालेर त्यसलाई राम्रोसँग तताउनुहोस् । यो नुनलाई अलि मोटो सूतीको कपडामा बाँधेर पोको बनाउनुहोस् । उक्त पोकोले कम्मरमा सेक्नुहोस्, आराम प्रदान गर्दछ ।
१०. अफिसमा काम गर्दा कहिले पनि ढाडको सहारामा नबस्नुहोस् ।हुन त कम्मर दुख्ने समस्या विशेषगरी ४५–६४ उमेर समूहको मानिसमा पाइन्छ । तर बढ्दो तनाव, अनियमित दिनचर्याका कारण यस्तो समस्या हरेकमा उत्पन्न भएको छ । अचम्मको कुरा के छ भने जसलाई यो समस्या शुरु हुन्छ, धेरैजसो मानिसहरुमा १।५ देखि ३ महिनामा स्तवः ठिक हुन्छ ।
किन दुख्छ कम्मर ?(मांसपेशीहरुमा अत्याधिक तनाव,अत्याधिक तौल,(गलत तरिकाले बस्नु ,(सधैंजसो अग्लो हिल भएको जुत्ता लगाउनु,(गलत तरिकाले अत्याधिक गह्रौं तौल उठाउनु,(लामो समयसम्म बिरामी हुनु,– अत्याधिक नरम डसनामा सुत्दा
९. कम्मर दुख्ने समस्या भएकाले व्यायाम गर्न पनि आवश्यक छ । स्विमिङ र साइक्लिङ यसको लागि राम्रो व्यायाम हो । स्विमिङले मानिसहरुको तौललाई कन्ट्रोल गर्दछ भने यसले कम्मर दुखाईमा लाभ पुर्याउँछ । साइकल चलाउँदा कम्मर सिधा राख्नुपर्छ । व्यायाम गर्दा मांसपेशीले ताकत पाउँछन् भने यसले तौललाई पनि बढ्न दिँदैन ।१०. अफिसमा काम गर्दा कहिले पनि ढाडको सहारामा नबस्नुहोस् ।